Home Wararka Saddax sano kaddib kuwii dhiibay Qalbi Dhagax, ONLF weli ma argagixisaa?
Saddax sano kaddib kuwii dhiibay Qalbi Dhagax, ONLF weli ma argagixisaa?
Magaciisu waa Cabdikariim Sheekh Muuse, waxaana lagu naanaysaa Qalbi-Dhagax , taas oo malaha loogu bixiyey calool adeygiisa, balse saddex sano ka hor wuxuu ruxey quluubta Soomaalida intooda badan, isaga oo noqdey shaqsiga loogu hadal heyn badnaa baraha bulshada iyo qalabka warbaahinta intuba.
Waxay ahayd markii ugu horreysay ee shacabka Soomaaliyeed intooda badan maqlaan magaca Qalbi Dhagax, waa sargaal sare oo ka tirsan jabhadda ONLF oo inta dowladda Soomaaliya qabatay, kadibna ku wareejisey Itoobiya saddex sano ka hor maanta oo kale
Ma ahayn nin horey caan uga dhex ahaa Soomaalida, marka laga reebo dadka ay isku qaddiyadda yihiin iyo laamaha sirdoonka dalalka geeska Afrika qaarkood oo laga yaabo in ay isha ku hayeen dhaqdhaqaaqiisa.
Wax kasta waxa ay isbadaleen taariikhda markii ay ahayd 23-dii bishii Agoosto ee sanadkii 2017. xilligaas oo Cabdikariim uu ka duulay magaalada Muqdisho, kana degay Gaalkacayo, si uu halkaasi uga soo qaado wiil yar oo qaraabadiisa ka mid ahaa sababo caafimaad awgood.
Waxaa ogaaday in uu Garoonka Adan Cadde ka dhoofay Taliyihii NISA ee wakhtigaas Cabdullaahi Sanbalooshe, waxaana u soo sheegay sirdoonka Itoobiya, isagoo markaa ballan qaaday in uu Gaalkacyo uga daba tagayo gacantoodana soo gelinaayo sida ay ilo wareedyo aad ula socday kiiska u sheegeen MOL.
Sanbalooshe aya ahaa shaqsigii ka danbeeyay soo qabashada & dhiibista Qalbi Dhagax, wuxuuna qadka telefoonka kula hadalsiiyay sirdoonka Itoobiya RW Kheyre & MW Farmaajo ayagoo u ballan qaaday in ay si hoose ula shaqeyn doonaan haddii gacan ay ku siiyaan Sanbalooshe soo qabashada & dhiibista Qalbi Dhagax.
Haddaba Saddax sano kaddib, Sanbalooshe wuxuu waayay xilkii uu hayay, wuxuuna isku dayay marar badan in uu ka gaabsado in uu ka hadlo kiiska Qalbi Dhagax wuxuuna mar walba ku jawaabaa “Mashruuca Qalbi Dhagax marabo in aan ka hadlo” Ileen waa nin og dabinta uu u dhigay Qalbi Dhagax oo ilaahay ka soo badbaadiyay cadowga uu u gacan geliyay.
Qalbi Dhagax oo wareysi bixiyay ayaa sheegay in uu dhowr jeer xabsiga ku soo booqday Sanbalooshe isagoo ula hadlay si jees jees ah, balse marnaba aan ku fekerin Sanbalooshe in Qalbi Dhagax uu xorriyadiisa dib u heli doono.
Shacabka Soomaaliyeed aya si weyn uga falceiyay sida araxan darrada ah ee Qalbi Dhagax loogu gacan geliyay Itoobiya.
Cabdikarin Sheekh Muuse “Qalbi Dhagax” Waa shaqsi xor ah oo si nabab ah ku nool maanta, balse waxaa su’aal ay inta badan dadka is weydiiyaan ah “Maxay dowladda Somalia weli uga noqon mowqfikii ay qaateen golahii wasiirada ee RW Kheyre, kuwaasoo ku sifiyeeyay ONLF in ay tahay urur argagixiso iyo in Qalbi Dhagax uu qeyb ka ahaa ururka Al Shabab.
Saddex sano kaddib weli waxay joogtaa meeshii ay joogtay maalintii la dhiibay Qalbi Dhagax.
Previous articleWarmurtiyeed hordhac ah oo laga soo saaray shirkii Garowe
Next articleMaxay ka wada hadleen Qoor Qoor & Gud. Cabdi Xaashi?
maamulka Puntland oo soo bandhigay dad ku howlanaa falal amni daro...
Xaaladda caafimaad ee PM Boris oo kasoo dartay